SAHIRANA NY RAY AMAN-DRENY : Mitombo isa ireo ankizy sy tanora mitsoaka ny ankohonany
Mitombo isa hatrany ireo tanora miala ny tokantrano kanefa tsy mampilaza ny ray aman-dreniny. 17 novembre 2021
Eto an-drenivohitra no tena ahitana ity tranga ity ambony indrindra. Misy koa anefa any amin’ny Faritra. Olona voajono tao anaty tambajotran-tserasera fesiboky ny ankamaroan’ireo mitsoaka ny tokantranony. Misy koa anefa ireo tarihin’ny namany sy nanana olana tao amin’ny ankohonana nisy azy.
Saika ho isan’andro, ahitana fitarainana sy fampilazana zaza very ao anaty tambajotran-tserasera fesiboky sy any amin’ny mpitandro filaminana eto an-drenivohitra. Araka ny antontanisa farany voaray avy amin’ny Polisim-pirenena, miisa sivy ireo ankizy hitan’ny Polisy niala tao amin’ny tokantranony tsy nampilaza ny ray aman-dreniny. Manodidina ny 13 ka hatramin’ny 16 taona eo avokoa izy ireo. Ny valo tamin’ireo dia ankizivavy avokoa ary lehilahy kosa ny iray. Ny fanazavana avy amin’ny mpitandro filaminana no nilaza fa : “Nisy tamin’izy ireo no nifampitarika nanao ny ditrany tany ivelany tany ka izao hita izao. Nisy koa ny milaza fa nobedesin’ ireo ray aman-dreniny ka tsy niverina tao an-trano intsony”. Nilaza ny Jeneraly Ramakavelo, iray amin’ireo mpanome vahaolana ho an’ny ray aman-dreny any anatin’ireny haino aman-jery ireny fa ao anatin’ny vanim-potoana manahirana indrindra isika eto Madagasikara amin’izao fotoana, raha izay fitaizana izay no asian-dresaka. Nambarany fa tsy tahaka ny taloha intsony ny zava-misy ankehitriny satria efa miova avokoa ny zava-drehetra. “Taloha, rehefa mananatra ankizy dia mahazo misafidy izay tiany ny ray aman-dreny. Misy ny avy hatrany dia mikapoka sy mikasi-tanana ho famaizana ilay zaza, misy kosa ireo manao ankivy ka tsy manome izay tadiavin’iny zaza iny intsony mandra-pahatongany saina. Azo natao tsara taloha ny nikapoka. Tsy nisy nanakiana firy na maratra aza ilay zaza voakapoka fa tena nampiharina ny hoe : “Ny zanaka tiana no tsy hitsitsiana rotsa-kazo. Amin’izao fotoana, mifanohitra amin’izay ny zava-misy, voafehifehy ny ray aman-dreny ary mety hisy hitory mihitsy aza raha mikapo-jaza”, araka ny fanazavany.
Nambarany hatrany fa sady mitondra zava-tsoa no mitondra voka-dratsy ny fisian’ny “Fiarovana ny zon’ny zaza” ampiharina eto Madagasikara. Zava-tsoa azo aloha, ny fiarovana ilay zaza amin’izay mety tsy ho zakany. “Azo sokajiana ho zava-tsoa ny fanerena ny ray aman-dreny hampiana-janaka raha mbola kely tsy mahaleo tena ny zaza. Ao anatin’ny zon’ny ankizy izany. Azo toriana sy enjehina araka ny lalàna ny ray aman-dreny mampiasa zaza tsy ampy taona na koa tsy mampianatra azy ireny.
Adidin’ny ray aman-dreny ny manabe ary adidiny ny mitaiza. Rehefa tsy feno ireo dia voatohintohina izay ny zon’ny ankizy”, hoy ny fanazavany. Nambarany koa anefa fa lesoka amin’ny fanekena ireny fenitra iraisam-pirenena ireny ny fampiharana be fahatany azy : “Mila ampifanarahana amin’ny kolontsaina malagasy ny lalàna ekena eto. Tokony hisy fakan-kevitra sy ady hevitra hatrany alohan’ny hampidirana zava-baovao iray. Samy mahalala isika fa nanan-kery ary nahitam-bokany tamin’ny fitaizana teto Madagasikara ny hoe : zanaka tiana tsy itsitsiana rotsa-kazo”. Nahitam-bokany teto Madagasikara koa ny fampandraisana anjara ny ankizy amin’ny raharaha ao an-tokantrano. Tsy midika ho fampiasana ankizy ireny fa fanazarana azy kanefa ireny indrindra no kororohin’ireo haino aman-jery vahiny sy lazainy ho fampiasana zaza tsy ampy taona rehefa tonga eto izy ireo manao fanadihadiana”, hoy hatrany ny fanazavany.
Tsy hala-jaza fa ditra
Nanantitra hatrany koa ny teo anivon’ny Polisim-pirenena fa “saika ditra ataon’ireo ankizy no nahatonga ny filazana azy ireo ho very fa tsy nisy hatreto ny trangana hala-jaza”. Misy koa anefa ireo ankizy maditra no mangalangalatra fahatany ka faizin’ny olona. Tranga tahaka izany no hita teny Ambohimahitsy-Mahazo, tamin’ny herinandro ambony iny. Raha iverenana ny tranga dia nisy ankizy voalaza fa nandroba tao amina tokantrano iray, tratran’ny tompon-trano ireto farany, ka nampidiriny tao anaty fiara saika hosaziany sy hateriny any amin’ny mpitandro filaminana. Nisy nahatsikaritra anefa izany fihetsika izany ka nivadika ho hala-jaza indray ny raharaha.
Tahaka izany koa ilay filazam-pikarohana voaray mikasika ny tovovavy iray atao hoe : “Kesiah” niparitaka ny fiandohan’ny herinandro teo. Nanaovana antso avo tao amin’ny tambajotran-tserasera fesiboky fa very, tsy hita popoka izay misy ity tovovavy ity rehefa niala tao amin’ny ray aman-dreniny. Samy nizara izany ny mpisera ka vetivety dia niparitaka ny vaovao. Ny harivan’ny talata 09 novambra teo ihany anefa dia nisy fanambaràna indray nilaza fa : “efa hita i Kesiah saingy noho ny fanadihadian’ny Polisy avy ao amin’ny borigady misahana ny heloka bevava vao manomboka dia mbola tsy manam-baovao azo lazaina ny fianakaviany”.
Misy hatrany ireo voajono
Tsy vao ireo akory ny tranga hita tao amin’ny pejy fesiboky fa efa marobe. Ny mahagaga anefa dia misy hatrany ireo voajono. “Sodokan’ny endrika ivelany sy ny mena miraviravy ny tovovavy ankehitriny, ka tsy maharitra fa avy hatrany dia tafaroboka. Ny tena olana, maro amin’ny ray aman-dreny no tsy afaka manara-maso akory izay ataon-janany noho ny tsy fahaizany mikirakira ireny haitao vaovao ireny. Efa tsy misy firy intsony koa ny fifampiresahana eo amin’ny samy mpianakavy. Tena marina fa mampifanakaiky ireo izay mifanalavitra ny fanatontoloana saingy manapotika ny fifandraisan’ireo mifanakaiky koa”, hoy hatrany ny Jeneraly Ramakavelo.
Antso no nataon’ny teo anivon’ny Polisim-pirenena manoloana tranga tahaka itony. Nambarany fa : ”mila mailo ny tanora manoloana ny rendrarendra maro samihafa miseho eny anivon’ny fiarahamonina eny. Ampiasao amin’ny fanitarana ny fahalalanao ny teknolojia fa aza avela hamotika ny vatanao sy ny fomba fisainanao. Ho antsika ray aman-dreny : Fitaratra ho an’ny zanatsika isika na amin’ny fomba fiteny na amin’ny fomba fihetsika. Aza variana amin’ny fitadiavana fotsiny ihany fa manàna fotoana hihainoana sy hiresahana amin’izy ireo”. Ny Polisim-pirenena moa dia efa midina ifotony mitety ireo sekoly eto an-drenivohitra mitondra fanentanana ho fiarovana sy fanampiana ireo ankizy.
“Tokony hoferana ny fampiasana teknolojia ho an’ny tanora. Manana andraikitra lehibe ny ray aman-dreny ary tompon’antoka ny zatovolahy manadala ireny zaza tsy ampy taona ireny. Rehefa mbola tsy ampy taona ny ankizy dia ny ray aman-dreny no tompon’antoka voalohany amin’izay ditra vitany any ambadika any. Ny fiarahamonina dia miova manaraka ny vanim-potoana. Tsy misy raikipohy mamaritra azy fa isika rehetra no mila mametraka lalàna iraisana”, hoy kosa ny mpahay fiarahamonina, Haja Rabetany.